Wax kabaro Dalalka Galbeedka Afrika fahad shaakir x. xasan
Tuesday 10th January 2017 16:12:05 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Sare
Wax kabaro Dalalka Galbeedka Afrika fahad shaakir x. xasan Ururka Wadamadda Galbeed Afrika waxa lo tixgaliya mid ka mid ah tiirka ugu weyn ee dhaqalaha Qaaradda Afrika. muhiimadda Urur lo samayeyey
Ururka Dhaqaalaha Bulshadda ee Wadamadda Galbeedka afrika ‘ECOWAS’. Waa Midow Urur ay ku bahoobeen Shan iyo Toban Dal oo Galbeed Afrika ah.
ECOWAS waxay u tagan tahay Economic Community of West African States. Waxa Magaalo Madaxda u ah Wadamadda Galbedka Africa waa Casimadda Dalka Nigeria ee Abuja. Luqadaha rasmiga ay ku hadlaan Dadweynaha Wadamadaasi waa English, French iyo burtuqiska ‘Portugal’ tiro kobka Dadweynahaasi waa 440,000,000 malyan oo ruux,wadarta guud Beedka ku fadhiyaan waa 5,112,903 km2 celceliska Dhaqalaha Wadamadaasi waa 2,002 trillion. Dhinaca u socodka Dalalkasi waa bila vise ayey ku galaan dhamman Dalalka xubnaha ah ururkas.
Waxaana la asaasay ururka ‘ECOWAS’ 28/5/1975 Magaaladda Logos ee Dalka Nigeria shaqadda ugu
weyn waxay ahayd in kor loqaado Dhaqaalaha iyo is dhexgalka Bulshadda o kula duwan Diimaha Dhaqanka iyo Luqadaha.
Ururka Wadamadda Galbeed Afrika waxa lo tixgaliya mid ka mid ah tiirka ugu weyn ee dhaqalaha Qaaradda Afrika. muhiimadda Urur lo samayeyey waxay tahay si loo gaaro wadajir iyo shuraako ah isku filansho dhinac kasta nolasha, ladagaalnka fakhriga, jahliga iyo Cuduradda.
Dalalka xubnaha ka ah waxay abuureen Ganacsiyo balaadhan yado lo maraayo sharuucda iyo xeerarka uqoran Urur dhaqaalaha Galbeed Afrika. waxay sido kale sameeyan Ciidamadda Nabad ilaalnta ee Gobolka oo ka turjumaysaa in ay ilaaliyaan wixi mushkiladda la soo darsa dhinaca Gobolka iyo wixi ka baxsan Afrika hadii lo baahdo.
Dalalka Galbeedka Africa waxay ka koban yihiin Benin, Burkina Faso, caboVerde, coted’aivoire, Gambia, Ghana, guinea,guinea, Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, sierra Leone iyo Togo
fahad shaakir <[email protected]
[DAAWO] Boqorka Geeska Afrika Iyo Hadaladiisa Maxaa Laga Baran Karaa?
Urur Hadda Lagaga Dhawaaqay Galbeedka Iyo Xukuumadda Oo Walaac Ka Muujisay + Solja Oo Gabaabsi Ku Jirta [Muuqaal Live Ah
Tacsi: Siyaasi Xasan Gadhweyne Oo Shacbiga Iyo Qaranka Somaliland Ka Tacsiyadeeyey Saddex Marxuum Oo Ka Baxay
Xog Dheerada Oo Ku Saabsan Shirka Maalgashiga Caalamiga Ah Ee Hadda Ka Socda Dalka Imaaraadka Iyo Dalalka Sannadkan Qudb
[Hadda Eeg:-] War-bixin Lagu Baahiyey BBC-da La Hadasha Afrika Oo Tilmaan Ka Bixisay Hab-dhaqanka Dawladeed Ee Somalilan